We are one of one of one of the professional Hot Runner Digital Temperature Controller Rubber & Plastic machinery, products manufacturers and supplier for Truck tyre, Car tyre, Off-the-Road Tyres, MCT, Wheels, Plastic machinery, hot runner system, Pipe, wheelbarrow & Tools စသည်တို့
နောက်ဆုံးထွက်ရှိနေသည့် Hot Runner Digital Temperature Controller In Stock ရှိပါသည်။
Hot Runner Digital Temperature Controller ၏ လုပ်ဆောင်ချက်
1. FUZZ + PIDD ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည် မှန်ကန်သော PID တန်ဖိုးကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး မည်သည့်အပူပေးသည့်ပုံစံကိုမဆို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး အလုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွန်တိုးတက်စေပါသည်။
2. အလိုအလျောက် ပတ်ဝန်းကျင် အတိုင်းအတာ အပူချိန် လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အပူချိန်တန်ဖိုးကို ပိုမိုတိကျစေသည်။
3. အမှားအယွင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ (သာမိုကုပ္ပါ) အဖွင့်၊ ပြောင်းပြန်၊ တိုတောင်းသော လမ်းအပူပေးသည့်ဒြပ်စင်များ တိုတောင်းသော၊ ဖျစ်များသည် ပတ်စ်ကစ်ဖွင့်ထားသည်၊ စသည်တို့နှင့် အော်ပရေတာများအား သတိပေးရန်အတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ melittin အချက်ပေးသံများကို ထောက်လှမ်းသည်။
4. အပူပေးစက် အထွက်ပတ်လမ်း စောင့်ကြည့်ခြင်း။
6. အပူချိန်သွေဖည်သော အချက်ပေးသံ
7. ယိုစိမ့်မှု အမှားကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
9.soft start lock function ကို
10. ပြည့်စုံသော အမှားအယွင်း ညွှန်ပြချက် output, သင်သည် လက်ရှိ ကျရှုံးမှု အကြောင်းရင်းကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သည်။
11. မှားယွင်းသောဝါယာကြိုးကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်၊ အပူပေးဝါယာကြိုး၊ အပူချိန်အာရုံခံဝါယာကြိုးသည် အပူဒြပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေမည်မဟုတ်ပါ။
12. မြင့်မားသောအပူချိန်, မြင့်မားသောဖိအားနှိုးဆော်သံ function ကို
13. screen display J/K type, J type, K type are interchangeable
Hot Runner Digital Temperature Controller ၏ အင်္ဂါရပ်များ
1. ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်မှုပါမစ်သည် အလွယ်တကူ disassembly။
2. သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ပေါ့ပါးပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ Anticorrosion နှင့် Antirust စွမ်းရည်မြင့်မားသည်။
3. ကတ်အရွယ်အစားနှင့် လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်သည် YUDO၊ Athena၊ DME၊ PCS၊ INCOE ကဲ့သို့သော အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4. ရွှေချထားသည့် ကတ်အပေါက်နှင့် စက်ကို ဖိအားဖြင့် ကိုင်ဆောင်ရန် အသုံးပြုပါ။ အချက်ပြမှုများကို ဘောက်စ်နှင့် ကတ်ကြားတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
5. heavy load connections နှင့် wiring method အမျိုးအစားကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
6. အချက်ပြများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာစေရန် ဝါယာကြိုးများနှင့် လေးလံသော ဝန်ချိတ်ဆက်မှုများကြားတွင် အအေးခံနိုင်သော ခလုတ်များကို အသုံးပြုပါ။
7. 1 2၊ 4၊ 6၊ 8၊ 10၊ 12၊ 24 ဇုန်များကို ရွေးချယ်ပါ။
8. Thermocouple ထည့်သွင်းခြင်းအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုမှားယွင်းခြင်းကြောင့် module ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
9. Thermocouple နှင့် အပူပေးစက် ပြောင်းပြန် အကာအကွယ်၊ ချိတ်ဆက်မှု မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော သာမိုကော့ပလီကို ကာကွယ်ပါ။
10. Soft-start မုဒ်၊ စိုထိုင်းဆကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အပူပေးစက်ကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။
hot Tags:: Hot Runner Digital Temperature Controller၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာတွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်